တောင့်ထား ရန်ကုန်၊ ရန်ကုန်ဆိုတာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ခံတပ် (ရန်ကုန်ကျရင် မြန်မာပြည် ကျပြီ) - Zet Star
တောင့်ထား ရန်ကုန်၊ ရန်ကုန်ဆိုတာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ခံတပ် (ရန်ကုန်ကျရင် မြန်မာပြည် ကျပြီ)
တောင့်ထား ရန်ကုန် ဒီကိစ္စလောက်ကို မင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။
တောင့်ထား ရန်ကုန်…မင်းလဲလို့ မဖြစ်ဘူး လေ။
ခဏခဏ လဲမလိုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့…. အကြိမ်ကြိမ် ပြန်ထပြီး… မာန်တွေ ဟန်တွေ မပြောက်ပဲ ရန်ကုန်ဟာ ရန်ကုန်ပါပဲဆိုတဲ့ သမိုင်းကောင်းတွေ မင်းမှာရှိတယ်။
တောင့်ထား ရန်ကုန်… မြန်မာ့ပြည်သူလူထုကို စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ မင်းပုခုံးပေါ်ကတာဝန်က…. ခေတ် အဆက်ဆက် မင်းလုပ်ခဲ့ရတဲ့ သမိုင်းပေးတာဝန်ပဲမို့လား…
တောင့်ထား ရန်ကုန်…. လူဖြူလူမဲ မင်းမခွဲခဲ့… အနူအဝဲ မင်းမရွေးပဲ…. နာမကျန်းသူတိုင်းကို မင်းမငြင်းပဲ… ခါးစီးခံပေးနေတဲ့မင်းရဲ့ သတ္တိနဲ့ သမိုင်း… ပေးဆပ်ခြင်း တံတိုင်းကြီးက…. ရန်ကုန်ဆိုတာ မြန်မာတို့ရဲ့ အနစ်နာခံပေးနေတဲ့ သူရဲကောင်းကြီးဆိုတာ ကမ္ဘာကြိးကသိတယ်။
စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေ မလာနဲ့လို့ မင်းမတားဘူး။ ရောဂါသယ်တွေကို မဝင်ခဲ့နဲ့လို့ မင်းမငြင်းဘူး။ ပြည်ပပြန်တွေ မဝင်လာဖို့ မင်းမတားဘူး။ စားဝတ်နေရေးမပြေလည်တဲ့ ပျံကျတွေဆိုပြီး.. မင်းမနှိမ်ဘူး… တောင်ပေါ်သား အညာသား မြေလတ်သား… ဘယ်အရပ်ကတိုင်းရင်းသားမို့ မင်းမခွဲဘူး… ဒုက္ခရောက်လို့ ပြေးလာသူတိုင်းကို… မင်းက လက်ကမ်းပြီး ကြို ခဲ့တယ်။ ငိုတဲ့သူ ရီတဲ့သူ…ရှိတဲ့သူ မရှိတဲ့သူ… ရိုးသားသူ မရိုးသားသူ လူစုံ လက်စုံ..အလုံးစုံကို… မငြိမငြူ ချေးမထူပဲ မင်းက ထမ်းပေးခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးပါ ရန်ကုန်။
မင်းဆီက ရင်ကော့ခေါင်းမော့ပြီး ထွက်သွားသူတွေ မင်းကိုယ်စော်ကား ပုတ်ခပ်ပြီး ထွက်သွားသူတွေ…. မင်းကိုယ် အပြုံးနဲ့နှုတ်ဆက် ထွက်သွားသူတွေ…. ဘယ်ပုံစံနဲ့ မင်းဆီကထွက်ခဲ့ ထွက်ခဲ့… ဒုက္ခတွေနဲ့ ပြန်လာလာ…သုခတွေနဲ့ပြန်လာလာ…. မင်းကတော့ လက်ကမ်းပြီး ကြိုခဲ့တယ်။
မင်းဆီလာ ပညာသင်.. မင်းဆီမှာ စီးပွားရှာ…မင်းဆီမှာ ကြင်ရာတွေ့… သူတို့မေ့ပြီး မင်းကိုယ် သတိမရပေမဲ့… အဆင်မပြေလို့ မင်းမြေကို ပြန်နင်းတဲ့အချိန်တိုင်း…. ပြုံးပြုံးကြီး နဲ့ လက်ကမ်းကြို… သဘောထားကြီးလိုက်တာ ရန်ကုန်ရေ….။
ကမ္ဘာ့ကပ်ဆိုးကြီးမို့ သက်ဆိုးမရှည်မှာကြောက်… ဟိုပျောက် ဒီပျောက်… ဟိုတစ်ယောက် ဒီတစ်ယောက် ကူးစက်မှုက မြန်လွန်းလို့ ကြောက်နေကြပေမဲ့… ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်အရပ်.. ဘယ်ဒေသ ဘယ်နေရာက ပြည်သူကိုဖြစ်ဖြစ်… မကြောက်မလန့် မင်းလက်ခံနေတာကို ကြည့်ရင်… မင်းက မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော့…. ရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှူး စစ်စစ်ကြီး။ ငါးတကာယိုတဲ့ချေး ခေါင်းမှာစုပြီး ခံပေးရတဲ့ ပုဇွန်တစ်ကောင်လို။ တွေးကြည့်ရင်တော့ အားနာမိပါရဲ့ ရန်ကုန်။ ဒါပေမဲ့လဲ…. မင်း အားကုန် လို့ မဖြစ်ဘူး။
တစ်နိုင်ငံလုံးက ပို့တဲ့ မေတ္တာနဲ့အတူ.. အမြန် ပြန် ထ…. ရန်ကုန်ဆိုတာ သမိုင်းကောင်းနဲ့မြို့… မြန်မာပြည်ရဲ့ ခံတပ်။ နွားသိုးမှန်ရင် ဂျိုချက်တော့ ဘယ်ကင်း မလဲ-?
မပူနဲ့ရန်ကုန်.. ၂၄နာရီအသင့်ဆိုတဲ့ ပရဟိတအဖွဲ့တွေရှိတယ်။ လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို ရှေ့ထွက်လာမဲ့… ဝန်းရံသူတွေရှိတယ်… တောင့်ထားရန်ကုန်…. အားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး…. ပြန်ထမယ်… ရန်ကုန်ဆိုတာ…. ဒီအခြေအနေ ဒီအနေအထားလောက် ကို…. No Problem လို့ အကျယ်ကြီး အော်ရင်း….. တောင့်ထားလိုက်စမ်း ရန်ကုန်ရေ….။ မင်းလဲလို့ မဖြစ်ဘူး ဟ။
ကျုပ်တို့ ဝန်းရံ အားပေးနေမယ်။
← ပေါက်ဖော်ကြီးတွေက ‌ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရွေးကောက်ပွဲမှာ နိုင်စေချင်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း
SY400 (သို့) မြန်မာတို့ရဲ့ တွေးခေါ်နိုင်မှု ဉာဏ်ရည်ကို စမ်းသပ်ခြင်း →